ZTF mamorona dingana - China Shijiazhuang Zhongtai Sodina
I. Inona no atao hoe ZTF?
ZTF dia namorona karazana teknolojia mivoatra ny Zhongtai Company tamin'ny taona 2005, izay hifantoka tanteraka nandroso ny teknolojia, avy ao an-toerana sy iraisam-pirenena, ary avy eo dia mahazo "Technology Innovation Award" Shina Cold fiforonana Steel Association.
ZTF Toetra mampiavaka:
1) Tsy mila miova lasitra ao amin'ny fizarana rava, fahavaratra ny 60% vola amin'ny fitehirizan-taratasy
2) Roll fiovan'ny fotoana dia hokapaina indrindra, rava fizarana dia tsy mila miova lasitra ary manitsy fotsiny dia ok. Ary afaka manapaka-midina mpamokatra fotoana.
3) Release hamafin'ny asa.
4) Roll namorona ny teknolojia, fakan-tahaka toa dia tsy mitovy sy propitious ho X70, N80 esory vy.
5) Ny vy dia diso ary esory beared kokoa ara-drariny, mba hampihenana ny RUB eo amin'ny esory sy ny-roller, ary koa mampihena ny fandaniam-poana ny-roller.
6) Mora kokoa hamerenana amin'ny laoniny sy hanitsiana ny-roller.
II. Aiza no ZTF ampiasaina?
Rolls in Faharatsiana fizarana
Raha tsorina dia Common Fampiasana
Common tanteraka Fampiasana
Rafitra sy ny fanatsarana ny
Miodina marindrano Rolls
No marindrano Rolls
Tanana hanitsy ny miodina, fanokafana sy famaranana ny fanesorana ny ambony sy ny fitehirizan-taratasy, ny ambany eo am-piandohan'ny horonana sy nifarana ny lavaka. Tanana haingana hanitsy fanafahana na Adjustable mats.
Electric hanitsy ny miodina, fanokafana sy famaranana ny fanesorana ny ambony sy ny fitehirizan-taratasy, tilting ambany horonam opeing & nifarana ny horonan-taratasy seza. Electric manitsy ny ny toerana eo amin'ny horonana izay fehezin'ny visy.
Electric hanitsy ny miodina, fanokafana sy famaranana ny fanesorana ny ambony sy ny horonam-. Computer manitsy ny tilting ny horonam ambany eo am-piandohan'ny & nifarana ny horonan-taratasy seza, ny toerana eo amin'ny horonana izay fehezin'ny visy
Rafitra sy ny fanatsarana ny Swiveling mitsangana Rolls
Tanana mifehy ny fanitsiana ny fanokafana & closeing, manandra sy miodina ny curve manokana horonana.
Tanana na electromotion hifehy ny fanitsiana ny fanokafana sy famaranana, manandra sy miodina ny curve manokana horonana.
Herinaratra fanaraha-maso ny fanitsiana ny fanokafana & closeing, manandra sy miodina ny curve manokana horonana.
Computer hifehy ny fanitsiana ny fanokafana & closeing, manandra sy miodina ny curve manokana horonana.
Fanitsiana ny hafa Rolls in Manodidina Izaho Jehovah no manao Fizarana
Rollers dia ho soloina rehefa vaovao famokarana haben'ny sodina.
Fitehirizan-taratasy misokatra sy akaiky ny lavaka, tanana hanitsy ny velona sy ny famotsorana Adjustable fandriana, ny fanandratako ny ambony horonana.
Fitehirizan-taratasy misokatra sy ny akaiky na ny lavaka eo amin'ny seza horonan-taratasy, tanana zatra ny toerana eo amin'ny horonana izay fehezin'ny visy, ny fanesorana ny horonam ambony.
Fitehirizan-taratasy misokatra sy ny akaiky eo amin'ny lavaka na horonan-taratasy fanaovam-panavotana. Electric zatra ny toerana eo amin'ny horonana izay fehezin'ny visy. Computer manitsy ny fanesorana ny horonam ambony.
Kiritika fanitsiana Device for Side mitsangana Rolls in Farany fiforonana sy Sizing Section
Fanitsiana for Rolls Position
-Araka ny marina ny Rolls Position Vao mizatra
Operation Site ny Rolls toerana Vao mizatra
Inside ny fitoeran-tavin
Outside ny fitoeran-tavin
Deformation-tsodina Blank Edge
Ny Formation for Avo Rrecision, High Steel Grade ary ny aizim-Wall Sodina
-Araka ny marina ny Sodina
Tena ambany dia ambany
Fotoana Manolo Rolls
Vao mizatra Online
Welded Sodina Making Machine Suppliers
Stainless vy cone Rolling namorona milina